ခေတ်သစ်လူနေမှုပုံစံနှင့် အစာအိမ် ရောင်ရမ်းမှု ပြဿနာ | OnDoctor
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံ
By OnDoctor Editor	 On Sep 29, 2020
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ၁၅ နှစ်နဲ့ မတူဘဲ လူနေမှုပုံစံတွေဟာ ပြောင်းလဲလာတာကို Dr.Z ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များ သတိထားမိကြပါသလား? “ဒီဆိုင်လေးနာမည်ကြီးတယ် သွားစားကြည့်ကြရအောင် သွားသောက်ကြရအောင်” စသည်ဖြင့် အစားတစ်လိုင်း အသောက်တစ်လိုင်းလေးတွေ ခါတိုင်းထက်များပြားလာတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ ခေတ်သစ်ရဲ့ လူနေမှု စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ အမျှ ကျန်းမာရေးပြသနာများဟာလည်း ပြောင်းလဲယှဉ်တွဲပြီး ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အဖြစ်များတဲ့ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှု ပြဿနာအကြောင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိတို့အစာအိမ်ကိုမထိခိုက်အောင် အစာအိမ်နံရံမှာ အချွဲ (mucus) အလွှာလေးတွေက ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထိုအလွှာလေးတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ရင် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းပြီး ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ၊ ပျို့တာ၊ အန်တာ မှအစ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ခြင်းထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှု နဲ့ နာတာရှည် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှု ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ နေထိုင်စားသောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာရှိပြီး နာတာရှည်ဆိုလျှင် H.pylori ဆိုတဲ့ ပိုးကြောင့်အစာအိမ်ရောင်တာနှင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကတိုက်လို့ အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဆိုပြီးရှိပါတယ်။
-ဘယ်လို လူနေမှုပုံစံက အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်လဲ? ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရလဲ?
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည့်အပြင် အစာအိမ်ကင်ဆာနှင့် တခြားသော ကင်ဆာရောဂါများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် စာတမ်းပြုစုခြင်းများ များစွာရှိထားခြင်းကြောင့် အထူးရှောင်ကြဉ်စေလိုပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းဟာလည်း အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် တခြားကျန်မာရေးပြဿနာများစွာနှင့် လူမှုပြဿနာများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝရှောင်ကြဉ်နိုင်လျှင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ပွဲလမ်းသဘင် အပေါင်းအသင်းများနှင့်တွေ့ဆုံလျှင် သောက်သုံးမည်ဆိုပါကလည်း အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်စေရန် သတိချပ်စေလိုပါသည်။
ခေတ်ကာလနှင့်အညီ အပြိုင်အဆိုင်များပြားလာတာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုများရခြင်းအကြောင်းအရင်းထဲက တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစိမှုများတာဟာ အစာအိမ်မှာပုံမှန်လုပ်နေကျအလုပ်တွေကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပြီး အစာချေရည်တွေပိုထွက်စေတာမျိုးကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းကို လျော့ကျစေရန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း စသည်ဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး မိမိစိတ်ကို ဖြေလျော့ ပေးသင့်ပါတယ်။
(၄) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း
အင်တာနက်များခေတ်စားလာသည်နှင့်အတူ ဆေးတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေဝယ်ယူလာကြသည်ကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ထိုထဲကမှ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသည် အစာအိမ်နံရံကိုကာကွယ်ပေးသော prostaglandin ကိုနည်းစေခြင်းကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မလိုအပ်ပဲအလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း မျိုးမပြုလုပ်သင့်ပါ။ လိုအပ်လို့သုံးစွဲလျှင်လည်း အစာစားပြီးမှ ဆေးသောက်သင့်ပြီး၊ မိမိမှာ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ဖူးပါက (သို့) ရေရှည်သုံးစွဲမှုမျိုးလိုအပ်လာပါက ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသာ သောက်သင့်ပါတယ်။
(၅) အစာစားချိန်မမှန်ခြင်း၊ အပူအစပ်စားလွန်းခြင်း
အစာစားချိန်ကျော်လွန်လျှင် အပူအစပ်စားလျှင် အစာအိမ်မှာအစာချေရည်များပိုမိုထွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်ကို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အစာစားချိန်မှန်မှန်စားခြင်း (သို့) အစားကိုအများကြီးတစ်ခါတည်းမစားဘဲ (small meal) အနည်းငယ်စီ ၅-၆ နပ်လောက်ခွဲစားပေးလျှင်လည်း အစာချေရည်အထွက်များခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၆) H.pylori ပိုးဝင်ခြင်း
ဒီပိုးကတော့ လူတော်တော်များများမှာမသိလိုက်ပဲ ရှိနေတတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ urease လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်း တစ်မျိုးထုတ်လွှတ်တာကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းစေတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ပိုးမဝင်အောင် လက်ကိုအစာမစားမှီ ဆပ်ပြာနှင့်ဆေးကြောခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသောအစာအစားများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ရေကိုကျိုချက်ပြီးမှသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ဆိုးကျိုးများစွာရှိခြင်းကြောင့် Dr.Z ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များကိုလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ဆင်ခြင်ပြီးနေထိုင်စားသောက်နိုင်ကြစေရန် စေတနာထားတင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံနဲ့ ကျန်းမာအသက်ရှည်စွာ နေထိုင်နိူင်ကြပါစေလို့ Dr.Z မှ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီဆောင်းပါးလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Author : Dr. Z
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ဖြစ်လာတတ်သော ကြွက်သားနာကျင်မှုများကို သက်သာစေရန် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ?
လေထိုး၊ လေပွခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်